Miisaska qaboojinta - Delta Engineering Belgium
Kariifka "miisaska qaboojinta"
Miiska qaboojinta & keydka - laba hawl oo dhinac ah
Miiska qaboojinta iyo keydku wuxuu xalliyaa dhibaatooyinka qaboojinta & keydinta ee wax-ka-beddelidda. Iska ilaali joogsiga khadka ee mashiinnada jarista & sumadaha & iska ilaali goobooyinka. Gawaarida xamuulka: 1200 mm ballaaran, 4000 mm dheer. Waxay kordhisaa hufnaanta khadkaaga wax lagu baakadeeyo.
Published in Miisaska qaboojinta
Tag: Joojinta khadka, hufnaanta khadka, gilgishay, qaboojinta, xumbo ku yaal sumadaha
Miiska qaboojinta iyo keydka - laba hawl oo dhinac ah
Miiska qaboojinta iyo keydku wuxuu xalliyaa dhibaatooyinka qaboojinta & keydinta ee wax-ka-beddelidda. Iska ilaali joogsiga khadka ee mashiinnada jarista & sumadaha & iska ilaali goobooyinka. Gawaarida xamuulka: 1400 mm ballaaran, 4000 mm dheer. Waxay kordhisaa hufnaanta khadkaaga wax lagu baakadeeyo.